सेयर बजारमा लगानी सुरु गर्न चाहनेका लागि वारेन बफेटका टिप्स
नयाँ पत्रिका काठमाडौं, ४ पुस | पुष ०४, २०७४
सेयर बजारका सफल लगानीकर्तामध्ये हालसम्मकै सर्वाधिक सफलता पाएका वारेन बफेट लगानीबजारका बादशाह नै मानिन्छन् । अमेरिकी व्यावसायिक पत्रिका फोब्र्सले सन् २०१७ मा प्रकाशन गरेको सर्वाधिक धनी व्यक्तिको सूचीमा परेका ८७ वर्षीय वारेन बफेटको सम्पत्ति ७५ अर्ब ६० करोड अमेरिकी डलर रहेको उल्लेख गरेको छ । ६० भन्दा बढी कम्पनीको व्यावसायिक समूह वर्क सायर ह्याथवे कम्पनीमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रहेका बफेटले आफ्नो नाफाको ९९ प्रतिशत रकम लोककल्याणकारी कार्यमा खर्च गर्ने घोषणा गरेका छन् । उनले हालसम्म ३२ अर्ब डलर सम्पत्ति सो कार्यमा खर्च गरेको फोब्र्सले उल्लेख गरेको छ । सन् २०१७ को ३० अगस्टमा ८७आैँ वर्षको जन्मदिनका अवसरमा उनले सेयर बजारमा लगानी गर्न चाहने नयाँ लगानीकर्ताका लागि केही सल्लाह सुझाब दिएका थिए । धितोपत्र बजारमा सफलता प्राप्त गर्न अनुभवको ठूलो भूमिका हुने उनको विश्वास छ । तर, धितोपत्र बजारमा कुनै अनुभव नै नभएका नयाँ लगानीकर्ताले चाहिँ कसरी सफलता प्राप्त गर्ने भनी सोधिएको प्रश्नमा उनले अनुभवप्राप्त लगानीकर्ताबाट थुप्रै कुरा सिक्न सक्ने बताएका थिए । उनले नयाँ लगानीकर्ताका लागि ८ वटा टिप्स पनि सेयर गरेका छन् ।
टिप्स नं. १ : लगानी विविधीकरण गर्नु सधैँ लाभदायक नै हुन्छ भन्न सकिन्न
धरै सफल लगानीकर्ताले लगानी विविधीकरणमा जोड दिएका छन् । तर, वारेन बफेटले सो विषयमा विमति राखेका छन् । लगानीका विषयमा धेरै जानकारी नभएका व्यक्तिले मात्र विविधीकरणमा जोड दिएका र त्यस्तै लगानीकर्ताका लागि मात्र फाइदामूलक हुने बफेटको मान्यता रहेको छ । अनुभवी लागनीकर्ताले दीर्घकालीन समयपछि नै भए पनि फाइदा हुने कम्पनीमा लगानी गर्ने गर्छन् र आफ्नो लगानीप्रति विश्वस्त हुने गर्छन् ।
एउटा कम्पनीको सेयर मूल्य कम भए पनि अर्को कम्पनीमा हुने वृद्धिबाट फाइदा लिन सकिन्छ भनी लगानी विविधीकरणको नीति उपयुक्त हुने तर्क गर्छन् । तर, यसो गर्दा पनि बदलिँदो परिस्थितिसँगै कम्पनीको धितोपत्र बजारमा कस्तो असर पर्छ भनी छुट्याउन झन् कठिन हुन्छ । सबै कम्पनीको छुट्टाछुट्टै विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ । विविधीकरण गरी आफ्नो लगानी सन्तुलन गर्न त विविधीकरण गरेका लगानीकर्ताका लागि सहज होला, तर लगानी गरेका प्रत्येक कम्पनीको अवस्थाबारे ध्यानकेन्द्रित गर्ने कुरामा कमी आउन सक्छ । आफ्नै लगानीका कुरा गर्दाचाहिँ बफेट राम्रो कम्पनीको सेयर खरिद गर्ने अवसर प्राप्त गर्न केही समय पर्खन पनि पछि पर्दैनन् । तर, जब राम्रो कम्पनीको सेयर खरिद गर्ने मौका आँउछ, सो मौकाको भरपूर सदुपयोग गर्ने गरेको बताए । बफेटका अनुसार ‘सुनको वर्षा भएका वेला ठूलै भाँडो लिएर टिप्न जाने हो, अमल्तुनो (सूचीकारले लुगा सिउँदा औँलामा सियोले नघोचोस् भन्नका लागि लगाउने उपकरण विशेष वा औँला मात्र अट्ने) सानो भाँडो लिएर जाने होइन’ ।
टिप्स नं २ : आफैँमा लगानी गर्नुहोस्
‘लगानीकर्ताले आफ्नै क्षमता अभिवृद्धि गर्नु सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुन्छ । आफ्नो क्षमता वा व्यवसाय विस्तार गर्न लगानीकर्ताले जे पनि गर्न तयार हुनु धेरै फलदायी हुन्छ ।’ यो मान्यतामा विश्वास राख्ने बफेट लगानीकर्ताले पनि आफ्नो ज्ञानको दायरा वृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् । लगानीकर्ताले सबैभन्दा बढी आफ्नै क्षमता अभिवृद्धि गर्न उनले सुझाएका छन् । धेरै मानिसले सेयर बजारबाट त्यति धेरै पैसा कमाउन सकेका छैनन् । आफ्नो अन्य व्यवसायबाट प्राप्त भएको पैसाले उनीहरू सेयर किन्न चाहन्छन् । तसर्थ, उनीहरूमा सेयर बजारको ज्ञान पर्याप्त नहुन सक्छ । सेयर बजारबाट फाइदा लिन क्षमता अभिवृद्धि र ज्ञानका लागि लगानी गर्नैपर्छ । आफैँलाई प्राथमिकतामा राख्नैपर्छ ।
टिप्स नं ३ः सफल लगानीकर्ता बन्छु भन्नेमा आफैँलाई विश्वास गर्नुहोस्
आफूले गरेको लगानीको विश्वास गर्न सक्नु सबैभन्दा गाह्रो विषय भएको बफेटले उल्लेख गरेका छन् । धेरै लगानीकर्ताले के सोच्ने गर्छन् भने, ‘अरूले गरेको लगानी उपयुक्त कम्पनीमा भएको छ र आफैँले लगानी गरेका कम्पनीचाहिँ गलत भएको छ ।’ यस्तो सोचाइ राख्नुको सट्टा अध्ययन गर्नु र आफैँलाई विश्वास गर्नु बढी फाइदाजनक हुन्छ । सफल लगानीकर्ता बन्नका लागि त्रास तथा भयमुक्त हुन जरुरी छ भने अरू मानिसले के भन्छ भन्ने कुरामा कुनै चासो दिनु आवश्यक छैन । लगानीसम्बन्धी र कम्पनीका विषयमा ज्ञान आर्जन गर्नु र आफूले उपयुक्त ठानेको कम्पनीमा लगानी गर्नु उत्तम विकल्प हो । हल्लाको पछि नलागी अरूभन्दा भिन्न भएर सेयर बजारको सफल लगानीकर्ता बन्न सकिने बफेटको सुझाब छ ।
टिप्स नं. ४ : आफूले जानेको र चित्त बुझेको कम्पनीमा मात्र लगानी गर्नुहोस्
लगानी गर्नुभन्दा पहिले धेरै लगानीकर्ताले कहिलेकाहीँ कुनै पनि कुरा सोच्दै नसोची लगानी गर्ने र कहिलेकाहीँ धेरै नै सोच्ने गरेको बफेटको भनाइ छ । पूर्ण रूपमा नबुझी कुनै पनि व्यवसायमा लगानी नगर्न बफेटले सचेत गराएका छन् । कुनै कम्पनीको सेयर खरिद गर्नुभन्दा पहिले सो कम्पनीले कसरी नाफा आर्जन गर्न सक्छ भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी छ ।
अब कस्तो ‘फेसन ट्रेन्ड’ आउँछ भनेर धेरै टिनएजरले अनुमान लगाउन सक्दैनन् अथवा लगानी बजारमा कुनचाहिँ सूत्रले काम गर्छ वा गर्दैन भनेर भन्न गाह्रो हुन्छ । अन्य मानिसले अध्ययन गरको भन्दा धेरै तथ्यांक अध्ययन गरे पनि लगानी बजारमा ‘अब शतप्रतिशत यस्तै हुन्छ,’ भनी ठोकुवा गर्न असम्भव नै हुन्छ ।
विगतमा गरिएका अनुमान ठ्याक्कै मिलेको भए त्यस्ता कम्पनीको धितोपत्रमा पनि लगानी गर्न उपयुक्त नहुने सुझाब बफेटको छ । यो काम तपाईंलाई गाह्रो लाग्छ भने अन्य लगानीका लागि अरूको भन्दा बेग्लै कम्पनी छनोट गर्नुपर्छ । सार्वजनिक रूपमा कारोबार हुने १० हजारभन्दा बढी कम्पनीमध्ये आफूले केही सय कम्पनी मात्र लगानीका लागि छनोट गरेको बताएका थिए ।
टिप्स नं ५ : सत्य समाचारमा ध्यानकेन्द्रित गर्नुहोस्, सत्य कुरा विश्वास गर्नुहोस्
हेडलाइनमा समाचार छापेका प्रत्येक कम्पनीको धेरै सेयर होल्ड गरी लामो समयसम्म नराख्न बफेटले टिप्स दिएका छन् । बफेट ‘नाइन्टी नाइन बाई वान रुल’ (उनान्सयका विरुद्ध एकको नियम) विश्वास गर्छन् । धेरै लगानीकर्ता आफूले पढेको एक प्रतिशत मात्र वित्तीय समाचारअनुरूप निर्णय लिने गर्छन् । तैपनि, आफ्नो लगानी भएका कम्पनीको नकारात्मक समाचार पढ्नेबित्तिकै सेयर बिक्री गरिहाल्छन् । उदाहरणका लागि कुनै कम्पनीको नाफा १० प्रतिशत कम भयो भन्ने समाचार सार्वजनिक भएसँगै सो कम्पनीमा लगानी भएका सेयरधनीले सेयर बिक्री गरिहाल्छन् । यदि कम्पनीले सय वर्षदेखि यस्ता आरोह–अवरोह सामना गर्दै आएको छ भने त्यस्तो घाटा पनि परिपूर्ति गर्न सक्छ । अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा धेरै लगानीकर्ताले गहन अध्ययन तथा विश्लेषण नै नगरी हतारमा निर्णय लिइहाल्छन् । प्रतिक्रिया जनाइहाल्छन् ।
टिप्स नं. ६ : कम्पनीको सेयर किन्नु भनेको सो कम्पनीको व्यापारिक अंश खरिद गर्नु हो
आफ्नो घरनजिकै भएको सुविधासम्पन्न सपिङ स्टोरको सेयर खरिद गर्नु सो स्टोरको स्वामित्व खरिद गर्नु पनि हो भनी कल्पना गर्नुहोस् । यो कुरा सोच्ने हो भने बजारको प्रतिस्पर्धा, आपूर्तिकर्ता र मूल्य तथा सो सपिङ सेन्टर रहेको स्थानको बारेमा तपाईंले आफैँ सोच्नुहुन्छ । यसैगरी, सेयर खरिद गरेका कम्पनीका बारेमा तपाईंले पनि सो कम्पनी सञ्चालकले जस्तै गरी सम्बन्धित विषयमा सबै जानकारी लिनुपर्ने हुन्छ । सेयर खरिद गर्नु भनेको कागजको टुक्रा किन्नुजस्तो पटक्कै होइन ।
टिप्स नं. ७ : गल्तीबाट सिक्दै जानुहोस्, हरेस नखानुहोस्
सेयर बजारमा सर्वाधिक सफलता पाएका वारेन बफेटले समेत गल्ती गरेका थिए । ठूला लगानीकर्ताले त गल्ती गर्छन् भनी गल्तीबाट हरेस नखाई लगानी गर्दै जानुपर्ने हुन्छ । तर, गल्तीबाट सिक्दै जान सकिन्छ भन्नेमा विश्वस्त हुनुहोस् । आफूले गरेका गल्तीको सूची तयार गर्नुहोस् र यसलाई रेकर्ड राख्नुहोस् । विगतमा भएका गल्ती फेरि नदोहोरिने गरी लगानीको निर्णय गर्नेमा आफूलाई विश्वस्त तुल्याउनुहोस् । आफूले गरेका गल्तीबाट सिकेका कुरा आफ्ना नानीहरूलाई जानकारी दिँदै जानुपर्छ ता कि उनीहरूले सो गल्ती कदापि नगरून् ।
टिप्स नं. ८ : एकदिने व्यापारी नबन्नुहोस्
कुनै पनि कम्पनीको सेयर खरिद गरी केही समयका लागि बिर्सन सक्नु पनि लगानीबाट राम्रो प्रतिफल प्राप्त गर्ने रणनीति भएको बफेटले बताएका छन् । ‘किन र होल्ड गर’ भन्ने नीतिमा विश्वास गर्ने बफेटले कुनै–कुनै कम्पनीको सेयर एकाध दशकसम्म पनि होल्ड गरिराख्न सक्नुपर्ने उल्लेख गरे ।
होल्ड गरी सेयर राख्नुका पछाडि दुईवटा मान्यताहरू रहेका छन् :
क) सस्तो मूल्यमा किनेका सेयर केही समयपछि वास्तविक मूल्यमा फर्कन्छन् ।
ख) यदि तपाईंले राम्रो कम्पनीको सेयर खरिद गर्नुभएको छ भने तपाईंको नाफा चक्रिय रूपमा बढ्दै जान्छ । यस्ता कम्पनीको सेयर जति लामो समय होल्ड गर्न सक्यो, त्यति नै बढी फाइदा हुने सम्भावना हुन्छ । तर, कम्पनी कस्तो प्रकृतिको हो भन्ने कुरामा निश्चित हुनचाहिँ जरुरी छ । राम्रो कम्पनीको सेयर खरिद गरी निष्क्रिय बसेका लगानीकर्ताले पुरस्कार पाउन सक्छन् । आफ्नो व्यावसायिक नाफामा समयले पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने कुरामा बफेट विश्वस्त छन् । ‘यदि तपाईं राम्रा कम्पनीको सेयर १० वर्षसम्म होल्ड गर्न सक्नुहुन्न भने १० मिनेटसम्म होल्ड गर्ने विषयमा पनि सोचेर नबस्नुहोस् ।’ नियमित रूपमा खरिद–बिक्री गरिरहँदा तपाईंले प्राप्त गरेको प्रतिफल पनि खरिद–बिक्री गरिदिने कम्पनी (ब्रोकर)ले लिने कमिसन र करमा उल्लेख्य मात्रामा खर्च हुन्छ । तसर्थ, राम्रा कम्पनीको सेयर खरिद गर्ने र केही समयका लागि होल्ड गरी राख्नु उपयुक्त हुन सक्छ ।
स्रोत : बिजनेस इन्साइडर
यातायात कसैले ठप्प पार्न सक्दैन : गृहमन्त्री थापा
‘बुल’ पछ्याउँदै नेप्से